ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “သိက္ခာရှိခြင်း၊ မရှိခြင်း”
ဒါကြောင့်လဲ ကြောင်ကျိုးဆင်ခြင် စဉ်းစားတတ်သူတိုင်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းကြည်တို့ဦးဝင်းတင်တို့ ကို မိဘတွေ လို လေးစားချစ်ခင်ကြတာပေါ့
ဒီပို့စ်အတွက်အရမ်းအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. အန်တီစုNLD EC နဲ့မတွေ့တာအစွန်းရောက်တယ်ဆိုပီး.. သူငယ်ချင်းတယောက်ကပြောတော့အစွန်းမရောက်ကြောင်း ပြောဖို့ဘယ်လိုဥပမာပေးရမှန်းမသိဖြစ်နေတာ.. အရမ်းကျေးဇူး
L or Kira ? (from Death Note)
If you can choose, whom would you choose ?
Two years ago, I chose Kira.
Now, I'd choose L.
However, it isavery delicate decisions.
Greedy methods are not always the best methods.
Exhaustive methods are always the best and the slowest.
The compromise ? How much is enough ? (from Computer Science)
“မရှိတာထက် မသိတာခက်၊ မသိတာထက် မလုပ်တာခက်” လို့ ယောမင်းကြီးဦးဖိုးလှိုင် စကားကို ကိုးကားပုံထောက်
ကိုပေါလဲ မဂ္ဂင်တရားရှစ်ပါး ကို အချိန်ယူပြီး ပွားများနေလို့ပို့ စ်တွေ ကြဲနေတာထင်ပါ့..း-)
S. Arya (15-11-09)? today is only 8-11-09 :P ? can u predict?
အလုပ်တခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် အကျိုးအပြစ်ကိုစဉ်းစားသင့်တယ်ဗျ အများအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်လုပ်ရမယ် ကောက်ကျစ်တဲ့လူတွေကိုရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာ ပရိရယ်ရှိဖို့လဲလိုတယ် မှန်တယ်တရားတယ်ဆိုပြီး မီးပုံထဲခုန်ဆင်းရင်တော့ ပြာပဲဖြစ်မှာပေါ့
To Anonymous (2:59 PM),
သြဝါဒစာစောင်အတွက် ကွန်ပြူတာစာစီပေးတဲ့သူက ဆယ်လပိုင်းလို့ ဖော်ပြလိုတာကို Typo error ကြောင့် ၁၁ လ လို့ ဖော်ပြမိတာလို့ ထင်ပါတယ်။ ရက်စွဲကို ကျနော် သတိမထားလိုက်မိဘူး။
မောင်ပေါ တို.ကတော. မာမီစု အီးပေါက်ရင်တောင်
To Anonymous (4:52 PM),
မိတ်ဆွေတို့လို ပရိယာယ်ကောင်းသူတွေ တပုံကြီးရှိလျက်နဲ့ အရေးတော်ပုံ ဒီလောက်ကြာရှည်နေရတာ နာသဗျာ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အီး မွှေးမမွှေးကတော့ မသိဘူးခင်ဗျ။
ကြောင်ချေးကတော့ နံတာ သေချာတယ်။ ဒါထက် ကိုယ့်လူကြည့်ရတာ “အီး၊ ချေး” ကိစ္စတွေမှာ အလွန်အမင်း စိတ်ဝင်စားဟန်တူရဲ့။း-)
ကိုပေါက ရွာနဲ့အနေဝေးနေတော့ ရွာကလူတွေရဲ့ တကယ့်လိုအပ်ချက်ကိုမသိဘူးဗျ ဘဝရပ်တည်ရေးအတွက် ရိက္ခာကိုသိက္ခာနဲ့ လဲနေရတဲ့အဖြစ်တွေတပုံကြီးဗျ ထမင်းစားတဲ့လူတွေပဲဗျာ သိတာပေါ့ဘယ်ဟာအမှားဘယ်ဟာအမှန် တရားတယ်မတရားဘူးသိတာပေါ့ ဘာလို့အမှန်တရားဖက်ကမရပ်ကြသလဲ စားဝတ်နေရေးမပြည့်စုံလို့ဗျ တနေ့၃ထောင်ရရင် ဘုန်းကြီးခေါင်းရိုက်ခွဲမဲ့လူတွေပေါ်လာတာလဲမဆန်းဘူးဗျ ဒီမိုကရေစီတို့ လူအခွင့်အရေးတို့ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အကြီးကြီးတွေကို ခဏထားလို့ လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကို အရင်ပြေလည်အောင်ဦးတည်လုပ်သင့်တယ်ဗျ ရေသောက်ဗိုက်မှောက်ပြီး NLDနောက်ပြည်သူတွေအသေခံလိုက်တာကြာပေါ့ အနစ်နစ်ဆယ်
ဒေါ်စုဘာလုပ်လုပ်အမှန် ကျန်တဲ့လူတွေအမှား ဒေါ်စုကိုမထိနဲ့မီးပွင့်သွားမယ် ဒေါ်စုကလုပ်တာလိုက်မလုပ်တဲ့ လူတွေ အခွင့်ရေးသမားတွေ ခင်ဗျားတို့အဲလိုပေါတောတော လုပ်နေတာကို စစ်တပ်ကသိတ်ကြိုက်နေတာဗျာ့
ရိက္ခာနဲ့ သိက္ခာကို လဲရဲတဲ့သူတွေကလည်း သူ့အမြင်ကိုသူပြောမှာပေါ့ကိုပေါ ရေ.ရိက္ခာက အရေးပိုကြီးတယ်ထင်တာလေ.သူ့ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ဘ၀အမြင်က ရိက္ခာများများရတဲ့အခါ ဘာဖြစ်ဖြစ်လိုက်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိူးထင်တယ်.ဒီလူ့ကိုလည်း ရိက္ခာများများပေးပြီး ၀င်မပြောဖို့ တောင်းပန်ရမလိုဖြစ်နေပြီ. နောက်ပြီးအန်အယ်လ်ဒီနောက်က နှစ်(၂၀)လုံး ပြည်သူတွေက လိုက်ပါခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ရိက္ခာသမားတွေက ဘယ်နေရာလေးကပါခဲ့ပါသလဲဗျာ.
ပုဆိုးခြုံထဲကလက်သီးပြနေခဲ့ရုံနဲ့ လိုက်ပါတယ်တော့မပြောနဲ့ဗျ ထောက်ခံတာပဲရှိသေးတာ
အမှန်နဲ့အမှားဆို တာဘေးတိုက် ဟိုဖက်ဒီဖက်တန်းတူချထားစရာလို့ထင်တယ် ထင်တယ် တကယ်က အထက်အောက်ဗျ အမှန်တရားက အပေါ်က အမှားတရားက အောက်က အလယ်မှာနေတယ်ဆိုရင်တောင် နည်းနည်းတော့မြင့်ဖို့လိုမယ်.တ၀က်တော့မြင့်ရမယ်ဗျ နို့မိုရင်တော့ ခြံစည်းရိုးခွထိုင်နေတာပဲဖြစ်တယ် ရိက္ခာများများရတဲ့ဖက်လိုက်သွားမှာ မျိူးကို ကြားနေတယ်ခေါ်တယ်လို့ ကျနော်မြင်တယ်ဗျာ..
((( အမှား နဲ့ အမှန် ကြားမှာ အလည်အလတ် ဝင်ရပ်တဲ့သူဟာ သိပ်မမှန်တဲ့လူပဲ ဖြစ်လာစရာအကြောင်းရှိပါတယ်။ အမှန်တရားကို လက်ကိုင်ထားသူ ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။...)))
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရှေ့ နေဦးညဏ်ဝင်းကို ထူးခြားတာဝန်တခုပေး ဆိုတဲ့ ကိုးရက်နေ့ ဒီဗွီဘီသတင်းထဲမှာ ဒီလိုဖတ်လိုက်ရတယ်။
( အမေရိကန်သံတမန်အဖွဲ့နဲ့ တွေ့ ဆုံတဲ့နေ့ က ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ နဲ့တွေ့ ဆုံနိုင်ဖို့စစ်အစိုးရက စီစဉ်ပေးခဲ့ပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ငြင်းဆိုတယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဦးညဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
"အဲဒီသတင်းက မပြည့်စုံဘူး၊ အကုန်လုံးမမှန်ဘူးတဲ့။ မမှန်တာကို သူမပြောချင်ဘူးတဲ့။ ကျေးဇူးတင်စရာတွေ ရှိတဲ့အတွက် သူခွင့်လွှတ်ပါတယ်လို့အဲလိုပြောပါတယ်" )
ကျနော်အနေနဲ့ တော့ တကယ့်အဖြစ်မှန်တွေ မှန်မှန်ကန်ကန်သိနိုင်ဖို့စဉ်းစားစရာတွေ အများကြီးလိုနေသေးသလို ခံစားရတယ်။
လန်ပမ်… ဒီသတင်းကို ညွှန်ပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဦးဝင်းတင် ပြောတာလေး ရှိတယ်။ သူရယ်၊ဦးခင်မောင်ဆွေရယ် ကို နအဖ က တရားဝင် စီအီးစီ လို့ မသတ်မှတ်ဘူးတဲ့။ အဲဒီတော့ စီအီးစီ နဲ့ပေးတွေ့မယ်ဆိုရင် သူတို့ပါရင် မရဘူးဆိုပဲ။
ဦးခင်မောင်ဆွေ က ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်တရား ဟောတုန်း က ပြောတာလေး ပြန်ပြောပြချင်တယ်။ မြွေပွေးဆိုတာ အရေခွံ လဲ ရုံနဲ့ မြက်လျှော မဖြစ်ဘူးတဲ့။ အဲဒီတုန်းက တစည ကို ရယ်ရွယ်ပြောတာပဲ။ အခု NLD စီအီးစီတွေက သူတို့နှစ်ယောက် က လွဲရင် မြွေပွေးရုံ ခြုံထားတဲ့ မြက်လျှောတွေ ဖြစ်နေပြီလေ။
Love reading your post. Great..
တကယ့်ကုို နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ ဦးအာရ်ယားရဲ့ စာသားလေးကတော့ မောင်သတိအတွက် ကူးချဖုို့အတော်ကောင်းဗျ.. ကျေးဇူးပါပဲ ကုိုပေါရေ..
အမြင်မတူတာလေးတော့ နဲနဲပွားပရစေဦးဗျာ.. ကဲ.. ဒီမုိုကရေစီနုိုင်ငံတော်ကြီး တည်ထောင်ရန်ဆိုတဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ ပန်းတုိုင်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာ.. အဲဒီပန်းတိုင်ကိုသွားဖို့ အတိုက်အခံတွေ ခုသုံးခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းတွေဟာ မှန်ကန်လား.. ဒီလောက် နှစ်နှစ်ဆယ် လုပ်ပီးချိန်မှာ လမ်းမှန်လို့ ရွာတွေ့ဖို့နေနေသာသာ ဘယ်ရောက်လို့ ဘယ်ပေါက်မှန်းမသိပဲ သူတို့အချင်းချင်းတောင် ဖရိုဖရဲတွေဖြစ်နေတဲ့ လမ်းကို မှန်ချင်မှန်မှာပေါ့ စောင့်ကြည့်ပါဥိးဆိုရင်တော့ အင်း.. ဘာပြောရမှန်းတောင် သိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဗျ.. ကျွန်တော် လက်ခံတာတော့ ဒီလမ်းဟာ မမှန်ဘူး.. အဲဒီမမှန်ချက်ကပဲ တတိယအုပ်စု ဆိုတာကြီးကို မွေးထုတ်လိုက်သလိုတောင် ဖြစ်နေသေးပါသဗျာ.. တတိယအုပ်စုရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို လက်ခံပီး နိုင်ငံရေးဝင်ကစားမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးကရော.. မသိနိုင်ဘူး.. မှန်ချင်မှန်မယ်.. မှားချင်မှားမယ်ဆိုပေမဲ့ နည်းလမ်းသစ်ဖြစ်တယ်.. နိုင်ငံရေး လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ပိုရလာတဲ့အတွက် ကစားကွင်း ကျယ်လာမယ်ဗျာ.. ဒီတော့ စမ်းကြည့်ကြမယ်ဆိုတဲ့ လမ်းပဲ.. ဒီနေရာမှာ မောင်သတိဟာ ကိုပေါလို အမှန်အမှားကို နှာစီးသလိုနဲ့ ကြားဝင်ရပ်တယ်လို့ မမြင်ဘူးဗျ.. မှားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကနေ အသစ်လမ်းကို လျှောက်မဲ့စိတ်ကူးလို့ မြင်တယ်.. ဒီတော့ ကိုပေါယုံကြည်သလို အထပ်ထပ် ရေးနေသလို စဉ်းစားဖို့လိုလာပီ.. အမှားနဲ့အမှန်မှာ အလည်ရပ်မလား/ လမ်းကြောင်း မှားနေတယ်ဆုိုတာ အချိန်ကရော အနေအထားကရော သက်သေပြနေတဲ့ အတုိုက်အခံတုို့ရဲ့ စနစ်အမှားကိုပဲ ဆက်ဖက်ထားမလား.. အမှန်ဘက်ကို ပြေးမလား.. ဟားဟား.. စဉ်းစားပေတော့ဗျို့..
အဲဒီမှာမှ ငါတို့ရဲ့ ဖီဆန်ကြ.. ဆန့်ကျင်ကြ.. ပိတ်ကြ.. ဆို့ကြ.. အထီးကျန်အောင် လုပ်ကြတွေကစလို့.. မလာကြပါနဲ့.. အသိမှတ်မပြုပါနဲ့.. အဖွဲ့ကိုမ၀င်စေနဲ့.. အဖွဲ့ကထုတ်ပစ်.. ကူပါ.. ကယ်ပါတွေအလယ်.. ၀င်တိုက်တော့.. ဖြုတ်ချပစ်ဆိုတဲ့အထိ အဆုံး လမ်းကြောင်းတွေကမှ မွန်မြတ်သော လမ်းကြောင်းတွေပါလို့ ပြောလာမယ်ဆိုရင်တော့ အင်း...
မောင်သတိမြင်တာတော့ ဦးတည်ချက်ပါပဲ.. ကိုပေါလေးစားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာဏာရရှိဖို့ ဆိုရင်တော့ ဖိနှိပ်သူနဲ့ တော်လှန်သူ အားနည်းတဲ့ဘက်က ရပ်တည်တာက ကောင်းပါတယ်.. ဒါတောင် အားနည်းတဲ့ဘက်လို့ မောင်သတိပြောတာ မှန်တဲ့ဘက်ဆိုရင် ဘယ်လောက်တောင် မှန်လို့လဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ရှိလာပါလိမ့်မယ်ဗျ.. အဲ.. နိုင်ငံတော်အရေးဆိုရင်တော့ မှားတဲ့လမ်းကြောင်း ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သေချာတဲ့လမ်းနဲ့ မှားမလားမှန်မလား မသေချာသေးတဲ့လမ်း အနည်းဆုံးတော့ မှားတဲ့လမ်းဘက်မှာ မရပ်သင့်တော့ပါဘူးဗျာ..
အခွင့်ကြုံလို့ ခပ်ရှည်ရှည်ပြောချင်တာက ဒီရွေးကောက်ပွဲကို ထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့.. ဒီမိုတော်လှန်ရေးရဲ့ ပိုရလာမဲ့ နိုင်ငံရေးအနေအထား ဆိုပီး အမြင်နဲ့ လက်ခံကြမဲ့ တတိယအုပ်စုဝင်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်.. ဒါကို ကိုယ့်အမှားလမ်းကြောင်းကို မယုံတာနဲ့ပဲ အခွင့်အရေးနဲ့ လဲမဲ့လူတို့.. အခွင့်အရေးသမားတို့.. ကပ်မြှောင်တို့ဆိုပီး ပုတ်ခတ်ပုံကတော့ အမြင်မတူတာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဖန်ဆန်းစစ်တတ်သူ မှန်ရင် မသုံးသင့်တဲ့ စကားတွေလို့ မောင်သတိ သတိပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျ..
အနည်းဆုံးတော့ဗျာ.. ဒီတတိယအုပ်စု ပေါ်လာတဲ့အတွက် ဒီမိုတွေဟာ အီယော့သွားနေလို့ မရဘူးဗျာ.. သူတို့ကို တတိယအုပ်စုရဲ့ အမြင်တွေက ကြိမ်တို့နေပီကိုး.. ဒီတော့ လုပ်ပြကြရတော့မယ်.. အရင်လို လေပစ်နေလို့ မရတော့ဘူး.. ဒါပေမဲ့ တုန့်ပြန်သူတွေဟာ မလိုတမာ အတင်းတုတ်သလို ပုတ်ခတ်ရုံကလွဲပီး ဘာမှထက်မလာတော့လည်း ဟားဟား.. မောင်သတိ နှစ်နှစ်ဆယ်ဆိုတာကို မအံ့သြောမိတော့ပါဘူး..
ခုတော့ အဲဒီပုတ်ခတ်အတင်းအဖျင်း အပြောခံ.. နာမည်ပျက်ခံပီး ရွေးကောက်ပွဲဝင် ဖော်ဆောင်ပေးလို့ ရလာမဲ့ လွတ်လပ်စွာပြောခွင့်.. တရားဝင် ဆန္ဒပြခွင့်ဆိုတာတွေကို လှိုင်လှိုင်သုံးလို့ အဲဒီ ဒီမိုတွေ လေကြီးမိုးကြီး ပစ်ကြမှာလဲ မြင်ယောင်ပါသဗျား..
အဲ.. သတိပေးချင်တာက သိပ်တော့လဲ မဟော့နဲ့ဦးဗျ.. တော်ကြာ မပြောကောင်း မဆိုကောင်း ဒေါ်စုကြီးတို့က ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့ တတိယအုပ်စု လမ်းစဉ် လိုက်ပါမယ်ဆိုလို့ ကိုပေါခမျာ ဟိုဘက်ရပ်ရမလား အလယ်ရပ်ရမလား ရပ်လက်စနဲ့ ခုရပ်နေတဲ့ အမှားဘက်ကြီးပဲ ဆက်ရပ်မလား စဉ်းစားရ ဖာထေးရ ခက်နေပါဦးမယ်ဗျာ.. ဟားဟား..
ရလိုက်တဲ့ဒီမိုကရေစီ...
န.အ.ဖ လက်ပါးစေများကလည်း ဘာမှန်းမသိ
လိုက် လိုက်တဲ့ သံယောင်...
ကိုပေါရေ..အမှန်နဲ့ အမှားကြားက ဘေးထွက်နေပါတယ်
ဆိုတဲ့ အကျိူးစီးပွားမျှော် တတိယအုပ်စုတွေ ပေါ်လာတာ လည်း ကောင်းပါတယ်ဗျာ သိရတာပေါ့ ဘယ်သူတွေ ဟာ ဘယ်လိုလူတွေလည်းဆိုတာ.တတိယအုပ်စုပဲ ခေါ်ခေါ် စတုထ္ထ အုပ်စုပဲခေါ်ခေါ် နအဖပေးမဲ့ ရသလောက် ဒီမိုကရေစီကို ဘာမှ မရတာနဲ့စာရင် ရသလောက်ယူပြီး ပြုပြင်မဲ့သူတွေ ဆိုတဲ့သူတွေက ကော အရင်တုန်းက အနှစ်နှစ်ဆယ်လုံးလုံး သူများတွေ လမ်းမှားချင်လည်းမှားမယ် ဒါပေမဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် မတရားတဲ့သူတွေကို မတရားဘူး မတရားတဲ့ဖိနှိပ်မှုကို မတရားဘူးဆိုပြီး ခုခံတွန်းလှန်ရတဲ့သူတွေက အငတ်ခံ အသေခံ အဖမ်းခံ နေတဲ့အချိန်မှာ အဲ့ဒီတတိယအုပ်စုတွေက ဘာတွေလုပ်နေကြပါလဲ..ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစွန့်လွှတ်မှုမရှိခဲ့လို့ ကိုယ့်ကို မရှိကြောင်းဝေဖန်တာ မကောင်းမြင်သမားတွေဆိုတာ ထက် အမှန်မြင်သမားတွေလို့ပဲ ပြောထိုက်ပါတယ်.ပြည်သူတရပ်လုံးက အသေခံ အဖမ်းခံပြီး လုပ်ခဲ့ကြလို့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ပေါ်လာပြီး တပြည်လုံးက တခက်နက်မဲပေးလို့ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ပါတီကို အကြောင်းအမျိူးပြ နှိပ်ကွက်နေတာ ပြည်သူတရပ်လုံးကို စော်ကားတာ မဟုတ်ဘူးလားဗျာ အဲ့ဒီလို စော်ကားခဲ့တဲ့သူတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ ဆန္ဒခံယူပွဲကကော ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ တတိယအုပ်စုသမားတွေ မသိဘူးမရှိပါဘူး အဲ့ဒီကြားက ကျားကပေးမဲ့ ကြင်နာမှုကို မျှော်လင့်နေတဲ့ တတိယအုပ်စုသမားများလည်း ပညာတတ်တွေမို့.သိမှာပါ .ပြည်သူတွေပေးခဲ့တဲ့ နာမည် ၀ိဒူရသခင်ချစ်မောင်ကနေ ခွေးကတက်ချစ်မောင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ သမိုင်းကိုလည်း ပြန်ရှာဖတ်ကြည့်ကြပါဦး..လို့..အကျိူးအမြတ် အကျိူးအမြတ်နဲ့ အမြီးလေးတနှံ့နှံ့ လုပ်နေမဲ့အစားပေါ့ဗျာ..ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေက ဘယ်နေမှန်းမသိ. ဒေါ်စုက ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုခဲ့ရင်တောင် ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သူတို့ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှု ကိုယုံကြည်လို့ ထောက်ခံပါတယ်.ခု တတိယအုပ်စုသမားတွေ က ဘယ်လိုလူတွေလည်းဆိုတာ ပြည်သူရှေ့မှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မညစ်ပတ်ကြေး ပြောခွင့်ရကြရင် ပြောချင်ပါတယ်...ပြိုင်ဆိုင်ပြီးကော တကယ်အရွေးခံရဲကြသလားလို့ပါ..တကယ်အစစ်အမှန်ရွေးကောက်ပွဲမှာပေါ့ မဆလ န၀တ နအဖ လုပ်ခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ဆန္ဒခံယူပွဲတွေ သမိုင်းကိုကြည့်ရင် ယုံလောက်စရာကို မရှိပါဘူး မယုံပါဘူး ဒါကကျနော်အမြင်..ကြည့်ကြသေးတာပေါ့..ဗျာ...ကိုပေါရေ. တတိယအုပ်စုသမားတွေကို ပြောပြပေးပါဗျာ..
အသိညဏ် တွေ ရိုက်ချိုးခံထား ရပြီး သရဲဘော ကြောင် တဲ့ ကောင်တွေ
၀ိုး.. တယ်ဟုတ်ပါလား.. မလာတာကြာလို့ ၀င်ဖတ်ကြည့်ပါတယ်.. ကိုယ့်ကော်မန့်လေးမှ ကွက်ပီးပျောက်လို့.. ကြည့်ရတာ အရှည်ကြီးရေးမိလို့ system က တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကြောင်ပီး ပျက်သွားတယ်ထင်ပဗျာ.. အဲဒီတော့လဲ တိုတိုပဲ ခေါင်းစဉ်လေး ပြန်ဖတ်သွားပါတယ်.. ဘာတဲ့.. သိက္ခာရှိခြင်း မရှိခြင်းဆိုပဲ.. ဟားဟား
Who the hell is that so called "Tha-Ti"?
Whom are you talking to with those " Tha-Ti" and "Thet-Thar".
We don't understand and never use ( at lease never being told ) those dogs' language. Those are only for dogs that ( NOT who ) will do everything when being asked.
ပျောက်သွားသော ကွန်မင့်များ (၁)
ဆိုတဲ့ အကျိူးစီးပွားမျှော် တတိယအုပ်စုတွေ ပေါ်လာတာ လည်း ကောင်းပါတယ်ဗျာ သိရတာပေါ့ ဘယ်သူတွေ ဟာ ဘယ်လိုလူတွေလည်းဆိုတာ.တတိယအုပ်စုပဲ ခေါ်ခေါ် စတုထ္ထ အုပ်စုပဲခေါ်ခေါ် နအဖပေးမဲ့ ရသလောက် ဒီမိုကရေစီကို ဘာမှ မရတာနဲ့စာရင် ရသလောက်ယူပြီး ပြုပြင်မဲ့သူတွေ ဆိုတဲ့သူတွေက ကော အရင်တုန်းက အနှစ်နှစ်ဆယ်လုံးလုံး သူများတွေ လမ်းမှားချင်လည်းမှားမယ် ဒါပေမဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် မတရားတဲ့သူတွေကို မတရားဘူး မတရားတဲ့ဖိနှိပ်မှုကို မတရားဘူးဆိုပြီး ခုခံတွန်းလှန်ရတဲ့သူတွေက အငတ်ခံ အသေခံ အဖမ်းခံ နေတဲ့အချိန်မှာ အဲ့ဒီတတိယအုပ်စုတွေက ဘာတွေလုပ်နေကြပါလဲ.... (ဆက်ရန်)
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစွန့်လွှတ်မှုမရှိခဲ့လို့ ကိုယ့်ကို မရှိကြောင်းဝေဖန်တာ မကောင်းမြင်သမားတွေဆိုတာ ထက် အမှန်မြင်သမားတွေလို့ပဲ ပြောထိုက်ပါတယ်.ပြည်သူတရပ်လုံးက အသေခံ အဖမ်းခံပြီး လုပ်ခဲ့ကြလို့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ပေါ်လာပြီး တပြည်လုံးက တခက်နက်မဲပေးလို့ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ပါတီကို အကြောင်းအမျိူးပြ နှိပ်ကွက်နေတာ ပြည်သူတရပ်လုံးကို စော်ကားတာ မဟုတ်ဘူးလားဗျာ အဲ့ဒီလို စော်ကားခဲ့တဲ့သူတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ ဆန္ဒခံယူပွဲကကော ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ တတိယအုပ်စုသမားတွေ မသိဘူးမရှိပါဘူး အဲ့ဒီကြားက ကျားကပေးမဲ့ ကြင်နာမှုကို မျှော်လင့်နေတဲ့ တတိယအုပ်စုသမားများလည်း ပညာတတ်တွေမို့.သိမှာပါ .ပြည်သူတွေပေးခဲ့တဲ့ နာမည် ၀ိဒူရသခင်ချစ်မောင်ကနေ ခွေးကတက်ချစ်မောင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ သမိုင်းကိုလည်း ပြန်ရှာဖတ်ကြည့်ကြပါဦး..လို့..အကျိူးအမြတ် အကျိူးအမြတ်နဲ့ အမြီးလေးတနှံ့နှံ့ လုပ်နေမဲ့အစားပေါ့ဗျာ..ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေက ဘယ်နေမှန်းမသိ. ဒေါ်စုက ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုခဲ့ရင်တောင် ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သူတို့ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှု ကိုယုံကြည်လို့ ထောက်ခံပါတယ်.ခု တတိယအုပ်စုသမားတွေ က ဘယ်လိုလူတွေလည်းဆိုတာ ပြည်သူရှေ့မှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မညစ်ပတ်ကြေး ပြောခွင့်ရကြရင် ပြောချင်ပါတယ်...ပြိုင်ဆိုင်ပြီးကော တကယ်အရွေးခံရဲကြသလားလို့ပါ..တကယ်အစစ်အမှန်ရွေးကောက်ပွဲမှာပေါ့ မဆလ န၀တ နအဖ လုပ်ခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ဆန္ဒခံယူပွဲတွေ သမိုင်းကိုကြည့်ရင် ယုံလောက်စရာကို မရှိပါဘူး မယုံပါဘူး ဒါကကျနော်အမြင်..ကြည့်ကြသေးတာပေါ့..ဗျာ...ကိုပေါရေ. တတိယအုပ်စုသမားတွေကို ပြောပြပေးပါဗျာ